Maqal:-Dhaq dhaqaaq tukaameysi oo heerkii ugu dambeyay ka maraya Bosaso – SBC
Maqal:-Dhaq dhaqaaq tukaameysi oo heerkii ugu dambeyay ka maraya Bosaso
Iyadoo si aad ah dadku ku dhaqan magaaladan Boosaaso ay ugu diyaar garoobayeen maalinta ciidul Adxa, ayaa waxaa soconaya dukaamaysi ay samaynayaan dadka qaybahooda kala gadisan haday noqon lahaayeen Waalidiin, Caruur iyo Dhalinyaro kuwaas oo iibsanaya waxyaabaha ku astaamaysan ciidaha ee ah dharka kabaha iyo alaabaha ay caruurta ku ciyaaraan iyo waliba macmacaanada.
Dadkan oo raxan raxo usocda ayaa lagu arkayay goobaha ganacsiga kuwaasoo wajiyadooda ay ka muuqatay farxad iyo udiyaargarawga ciida Carrafo, hadaba dadkaas ayaan la dhexqaadnay Microphone-ka SBC iyagoo ka hadlayayana hadaladoodii halkan ka Dhageyso.
Dadka ayaa badankiisa warbaahinta SBC international u sheegay in ay Ciidan Ciidihii hore ay kaga duwan tahay dhaqaalo xumo baahsan oo markaasi sababaya in ay yaraadaan waxyaabaha ay dadku iibsadaan maalmaha ciida hadaba dadka iyagu ka ganacsada alaabaha Ciida ayaa iyaguna la hadlay SBC sheegayna sidan Dhageyso.
Inta badan Ciidaha Waaweyn ee uu Islaamku leeyahay ayaa magaalooyinka Dalka Soomaaliya waxaa siweyn looga dareemaa kala duwanaansho dhanka ganacsiga ah xiliyadaasi iyo xiliyadii hore.
Waxaa sidoo kale Ciidan oo ah Ciida Carafo soconaya Iibsashada Xoolaha nool ee la qowraco maalinta ciida, waxaana seylada weyn ee lagu iibiyo magaalada Boosaaso laga dareemayaa dhaq dhaqaaq kala gadasho ah.
Maxamuud Cabdi Siciid